‘चीनले आफ्नो विकास अनुभव सबै मित्रहरुलाई सुनाउन चाहन्छ, थोपर्न होइन’ – Nepal Press
२०७७ पुष २८ गते ९:४४
चीनको सिचुवान प्रान्तसहित लसान सहरमा अवस्थित लसान नर्मल विश्वविद्यालयकी अर्थशास्त्र विषयकी प्राध्यापक तङ चियानले चिनियाँ एवं विश्व अर्थतन्त्रवारे गहन अध्यन गरेकी छिन्। उनी उक्त विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागकी डीन समेत हुन् । नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको आर्थिक विकास र पद्धतीवारे राम्रो जानकारी राख्ने उनी चीन र दक्षिण एसियाबीच जति धेरै सहकार्य हुन सक्यो त्यति नै आर्थिक–सामाजिक प्रगतीकालागि सहज हुने धारणा राख्छिन् । नेपालको विकास प्रक्रिया एवं आर्थिक गतिविधिलाईसमेत नजिकबाट नियालिरहेकी प्राध्यापक तङसँग लसान नर्मल विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत नेपाली प्राध्यापक डा. बुद्धिप्रसाद शर्माले गरेकाे नेपाल टक ।
नेपाल-चीनबीचको सम्वन्धलाई ऐतिहासिक एवं वर्तमान सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
नेपाल र चीन विश्वकै पुराना मलुकहरु हुन् । इतिहासदेखि नै दुई मुलुकबीच अत्यन्त सौर्हादपूर्ण सम्वन्ध रहँदै आएको छ । ज्ञान, संस्कृति, व्यापार लगायत आदानप्रदानको इतिहास निकै पुरानो छ । यसले गर्दा नै दुई मुलुकका जनताहरुबीच आपसी विश्वास र सहकार्य बलियोसँग कायम हुँदै आएको छ । दुवै मुलुकले एक अर्काका अप्ठ्याराहरुमा साथ–सहयोग पनि गर्दै आएका छन् । अध्यक्ष माओत्सेतुङको नेतृत्वमा सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भएयताको इतिहास हेर्दा पनि सम्वन्धमा थप सुमधुरता, गहन सहकार्य, आदानप्रदान र विश्वास उल्लेख्यरुपमा बढेको छ ।
भगवान बुद्धको जन्मस्थल भएका कारण नेपाल करौडौं चिनियाँ बौद्ध धर्मावलम्वीहरुको लागि अति महत्वपूर्ण मुलुक हो । चीनको सिचुवान प्रान्तमा पनि लाखौं बौद्ध धर्मावलम्वीहरु छन् । नेपाल र चीन अत्यन्त पुराना मित्रहरु हुन् । यो सम्वन्ध दुई मुलुकका जनताहरुबीचको अत्यन्त घनिष्ठताले थप मजवुत बनएको छ, र यो स्थिति वर्तमान अवस्थामा थप गहन हुँदै गएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
आर्थिक खुलापनको नीति सुरुवात गरेको छोटो समयमै चीनले चामत्कारिक विकास हासिल गरेको छ । यो प्रगतीको विश्वभरिबाट नै चीनको प्रशंसा हुने गरेको छ । नेपालजस्ता मुलुकहरुले चीनको समृद्धि यात्राको अनुभवबाट के सिक्न सक्छन् ?
नेता तङ सियोओफीङको अग्रसरतामा चीनले सन् १९७८ मा सुधार एवं खुलापन अगाडि बढाउने वैज्ञानिक नीति लियो । धेरैले यसलाई आर्थिक सुधारको रुपमा मात्र बुझ्ने गरेको भए पनि यो वास्तवमा समग्र चिनियाँ विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि गरिएको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, प्राविधिक, अन्र्तराष्ट्रिय सम्वन्ध लगायतमा चीनलाई परिस्कृत गर्दै लैजाने वृहत अठोट थियो । वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मेहनत, समग्र पहल एवं निरन्तरताका कारण चीनले छोटो समयमै प्रगती गर्दै चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादलाई कार्यान्वयन गरेको छ ।
नेपालजस्ता गहन मित्रहरुले चीनको अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्दै आफ्नो धरातलीय यर्थाथता, आर्थिक अवस्था, आर्थिक–सामाजिक परिवेशका आधारमा विकासको मोडल तयार गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन अत्यन्त सक्रियता प्रर्दशन गर्नुपर्छ । चीनले आफ्नो अनुभव सवै मित्र राष्ट्रहरुसँग सुनाउन चाहन्छ, तर, थोपर्न चाहदैँन ।
सन् २०२० को अन्त्यबाट चीनले गरिवीलाई पूर्णरुपमा उन्मुलन गरेको छ । एक अर्थशास्त्रीको नाताले चिनियाँ विकासको अनुभव भन्नुपर्दा, पहिलो त हामीले चीनको धरातलीय यर्थाथका लागि कस्ता किसिमका योजनाहरु आवश्यक छन् त्यो निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्‍यौं । दोस्रो, हामीले हाम्रा सवल र दुर्वल पक्षहरु स्पष्टरुपमा पहिचान गरेर त्यस अनुसार वैज्ञानिक ढंगबाट कार्यान्वयन गर्‍यौं । तेस्रोे, समस्यालाई व्यापक परिवर्तनको थालनी गर्ने अवसरको रुपमा लिएर अगाडी बढ्यौं । चौथौं, समग्र चीनको विकासको चिनियाँ नेतृत्वको अठोटलाई साकार पार्न केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका सवै निकायहरु उत्तिकै जीम्मेवार भएर अगाडि लागे । र पाचौं, चीनले आफ्नो प्रगतीसँगैं त्यसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध, सहकार्य र साझेदारीलाई पनि उत्तिकै गहनरुपमा अगाडि बढाउँदै लग्यो, जसले गर्दा चीनले आफ्नो क्षमता अनुसार लाभ लिनेदेखि विश्वमा योगदान गर्ने प्रक्रिया पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्यो ।
त्यसकारण, नेपाल जस्ता गहन मित्रहरुले चीनको अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्दै आफ्नो धरातलीय यर्थाथता, आर्थिक अवस्था, आर्थिक–सामाजिक परिवेशका आधारमा विकासको मोडल तयार गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन पक्षमा अत्यन्त सक्रियता प्रर्दशन गर्न सक्नुपर्छ । चीनले आफ्नो अनुभव सवै मित्र राष्ट्रहरुसगँ सुनाउन चाहन्छ, तर आफ्नो मोडल कहिल्यै पनि अरु मुलुकमाथि थोपर्न चाहदैँन । किनकि प्रत्येक मुलुकले आफ्नो धरातलीय यर्थाथता अनुसार विकास एवं सुधारका मोडल तथा नीतिहरु तयार गर्नुपर्छ।
चीनले अगाडि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) ले मुख्यगरी विकासशील विश्वबाट सकरात्मक प्रतिक्रिया हासिल गरेको पाइन्छ । नेपाल जस्ता मुलुकहरुले बीआरआईबाट के र कसरी लाभ लिन सक्छन् ?
चीन वास्तवमा आफूले हासिल गरेको उपलव्धिलाई विश्वभरका मित्र राष्ट्रहरुससँग साझेदारी गरेर विश्वको साझा सपना पूरा गर्न लागिपरेको छ । त्यही योजनाअनुसार राष्ट्रपति सी जिनफिङबाट बीआरआईको सुरुवात भएको हो । चीनले अगाडि बढाएको भए पनि यो विश्वका सवै मुलुकहरुले आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुसार साझेदारी र योगदान गर्ने गरी संरचना तयार गरिएको हो, त्यसैले यो सारा विश्वकै अभियान हो भन्ने चीनको मान्यता रहेको छ ।
बीआरआईले आर्थिक, प्राविधिक, पूर्वाधार, सांस्कृतिक हुँदैं विविध क्षेत्रका गहन साझेदारीको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको छ । छोटो समयमै बीआरआई अन्र्तगत अगाडि बढेका सहकार्यहरु र साझेदारी हेर्दा पनि अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले यसलाई आत्मसाथ गरेको र वृहत सञ्जालमार्फत गहन साझेदारी गरेर अगाडि बढ्दा नै विश्वको हित छ भन्ने स्वीकार गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
बीआरआईले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै सहकार्य गर्ने आधार तयार गरिदिने हुँदा नेपालजस्ता मुलुकहरुले आफ्नो आर्थिक सामाजिक प्रगतीका लागि व्यापक लाभ लिन सक्छन् । लगानी आकर्षण, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, ज्ञान–सीपको आदानप्रदान, व्यापार विस्तार, पर्यटन लगायत अनेक क्षेत्रमा अत्याधिक साझेदारी गरेर राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार लाभ लिन सक्छन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, यी सवै योजनाहरु सम्वन्धित मुलुकहरुकै आवश्यकता, सामर्थता र चाहनाअनुसार अगाडि बढ्ने हुँदा सम्वन्धित मुलुकले दीर्घकालीन लाभ हासिल गर्न सक्छन् ।
भूपेरिवेष्ठित मुलुक नेपालका लागि त अन्र्तराष्ट्रिय समुदायसँग थप गहन किसिमबाट सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न यसले पुलको नै काम गर्छ । नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा बीआरआई अन्र्तगत साझेदारी गर्ने गरी समझदारी गरेयता कतिपय परियोजनाहरुको कार्य अगाडि बढिसकेको र थुप्रै परियोजनाहरु अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको पाइन्छ।
चीन आफ्नो चामत्कारिक आर्थिक विकासको उपलव्धिलाई विश्व समुदायमाझ कसरी अनुभव आदानप्रदान र साझेदारी गर्न चाहन्छ?
चीन आफ्नो विकास समृद्धिलाई निश्चितरुपमै विश्व समुदायमाझ उदार भावले साझेदारी गर्दै विश्वका साझा समस्या एवं चुनौतीहरुको सम्वोधनका लागि योगदान दिन चाहन्छ, र गर्दै पनि आएको छ । पछिल्लो तीन दशक चीन कुुनै पनि किसिमको युद्धमा सहभागी भएको छैन् । शान्तिपूर्ण विकासको मार्गबाटै अगाडि बढेर विश्व समुदायको एक जीम्मेवार सदस्यको नाताले अधिकतम योगदान गर्न चाहन्छ ।
चिनियाँ विद्यार्थीहरु पनि नेपालमा अध्यन गर्न जानेदेखि लिएर विविध किसिमका शैक्षिक आदानप्रदान धेरै नै बढेको छ । यो अवस्थाले पनि दुई मुलुकहरुबीच बढ्दै गएको जनस्तरको सम्वन्धलाई उजागर गर्छ । चीन चाहन्छ कि धेरै नेपाली विद्यानहरु चीनमा आएर अनुसन्धानहरुमा सक्रिय रहुन् र मित्रता थप गहन हुँदै जाओस् ।
विश्वको साझा सपना पूरा गर्न चीन आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने योगदानमा लागिपरेको छ । यतिखेर विश्वको हरेक कुनामा चीन पुगेर सहकार्य अगाडि बढाएको छ । विश्वका सवैभन्दा बढी मुलुकहरुसँगको प्रमुख व्यापार साझेदारीदेखि व्यापक लगानी विस्तार हुँदै जनस्तर एवं गहन सांस्कृतिक आदानप्रदानमा चीन अगाडि बढेको छ ।
चीनको विकासबाट कोही पनि तर्सिनु पर्दैन । शान्तिपूर्ण विकासको माध्यामबाट नै गहन साझेदारी बढाएर विश्वमा शान्ति, स्थिरता र विकासको लागि अधिकतम योगदान गर्न चीन तयार छ, र त्यहि अनुसार अगाडि बढेको छ ।
नेपाल र चीनबीच शैक्षिक स्तरमा सहकार्य बढाउन थप के के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?
केही वर्षयता नेपाल र चीनबीचको शैक्षिक आदानप्रदान एवं सहकार्य हेर्दा धेरै आशा गर्न सकिने देखिन्छ । अहिले हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरु चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा अध्यनरत छन् । नेपाली विद्यार्थीहरु चीनमा अत्यन्त मेहनती, प्रतिभावान र अनुशासित मानिन्छन् । नेपालका विद्यानहरु चीनका धेरै विश्वविद्यालय एवं थिंकट्यांकमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
चिनियाँ विद्यार्थीहरु पनि नेपालमा अध्यन गर्न जानेदेखि लिएर विविध किसिमका शैक्षिक आदानप्रदान धेरै नै बढेको छ । यो अवस्थाले पनि दुई मुलुकहरुबीच बढ्दै गएको जनस्तरको सम्वन्धलाई उजागर गर्छ । चीन चाहन्छ कि धेरै नेपाली विद्यानहरु चीनमा आएर अनुसन्धानहरुमा सक्रिय रहुन् र मित्रता थप गहन हुँदै जाओस् । भविस्यमा यस किसिमका सहकार्यहरु थप बढाउनका लागि मेरो विचारमा दुवैतर्फ गहन आदानप्रदान, विश्वविद्यालय एवं थिंकट्यांकबीच साझेदारी, अनुसन्धानमा सहकार्य, ज्ञान एवं प्रविधिको नियमित आदानप्रदान र विभिन्न तहका शैक्षिक सहकार्यहरु बढाउनुपर्छ ।
भविश्यमा नेपाल-चीनबीचको जनस्तर एवं सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई थप मजबुत बनाउन के-के गर्नुपर्ला ?
नेपाल र चीन दुवै पुराना सभ्यता भएका छिमेकी मुलुकहरु हुन् । त्यसकारण पनि दुई मुलुकहरुबीचको जनस्तर एवं सास्कृतिक आदानप्रदानको इतिहास निकै नै लामो छ । यो सम्वन्ध विश्वास, सहकार्य र मेलमिलापमा आधारित छ । सन् २०१५ मा नेपालमा विनासकारी भूकम्प जाँदा चीनले तुरुन्तै सहयोगको हात अगाडि बढाएर मित्रको अप्ठ्यारोमा हामी नजिकै छौं भन्ने सन्देश दियो । नेपाल र चीनबीच सन् १९५५ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्वन्ध स्थापना भएयता चीनले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा नियमित सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
देशमा केही राम्रो भइरहेको छ भन्ने आत्मविश्वास जनतामा बढ्न थाल्यो भने उनीहरुले कैयौं गुणा आफ्नो प्रयासलाई बढाउन थाल्छन् । नेपालले आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण गरी पर्यटनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । विशाल जनसंख्या भएका दुई छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतबाट मात्र पनि पयर्टक भित्र्याउन सक्ने हो भने पनि यथेष्ट लाभ लिन सक्छ ।
अहिले चीन नेपालको प्रमुख लगानीकर्ता र दोस्रो ठूलो व्यापारीक साझेदारी मुलुक हो । चीन नेपालमा स्थिरता, शान्ति र विकास चाहन्छ, यसका लागि आफ्नोतर्फबाट नेपालको आवश्यकता अनुसार सवै किसिमको सहयोग पुर्‍याउन तयार छ । सम्वन्धलाई थप गहन, विश्वासमा आधारित र दीर्घकालीन बनाउन जनस्तर एवं सास्कृतिक सम्वन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै लैजानुपर्छ ।
यसका लागि आवश्यकता अनुसार थप नयाँ समद्यदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सुन्दर मुलुक नेपाल चिनियाँ पर्यटकहरुको लागि अति आर्कषक गन्तव्य मुलुक भएकोले यसबाट लाभ लिन पनि थप प्रचारप्रसार एवं सक्रियता बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
नेपालले समृद्ध नेपालको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ, भलै विकास प्रक्रिया निकै सुस्त भयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ । नेपालले तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्नका लागि ठोसरुपमा के–के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
नेपाल अत्यन्त सुन्दर मुलुक हो । प्राकृतिक सम्पदाको हिसावले पनि धनी छ । एक अर्थशास्त्रीको नजरबाट हेर्दा मेरो दृष्टिकोण के छ नेपालले आफ्नो वास्तविक धरातलीय यर्थाथता अनुसार विकासको मोडल तय गर्नु पर्छ । अरुका प्रगती एवं अभ्यासबाट सिक्नु पर्छ नै, तर आफ्नो मुलुकमा चाहिँ स्वदेशकै आवश्यकता र यर्थाथता अनुसार तरिका, पद्धती एवं एप्रोच तय गर्नुपर्छ । यसो भयो भने कार्यान्वयन गर्न सहज हुनुका साथै नागरिकले वास्तविक परिवर्तनको अनुभव गर्न थाल्छन् । अर्को हो, नेपालले स्वदेशी एवं बैदेशिक पुँजी आकर्षित गरी तुलनात्मक रुपमा बढी लाभ हुने क्षेत्रमा लगानी तथा विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक राजनीतिक प्रतिवद्धता, प्रशासनिक चुस्तता एवं कानुनी सहजताजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुलाई सदा तयार गरी राख्नुपर्छ ।
देशमा केही राम्रो भइरहेको छ भन्ने आत्मविश्वास जनतामा बढ्न थाल्यो भने उनीहरुले कैयौं गुणा आफ्नो प्रयासलाई बढाउन थाल्छन् । नेपालले आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण गरी पर्यटनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । नेपालका विशाल जनसंख्या भएका दुई छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतबाट मात्र पनि उल्लेख्य मात्रामा पयर्टन भित्राउन सक्ने हो भने पनि नेपालले यथेष्ट लाभ लिन सक्छ । यस्तै गरी नेपालले आफूलाई चीन र दक्षिण एसिया जोड्ने पुलको रुपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने यसले नेपाललाई दीर्घकालीनरुपमा सार्मथ्यवान बनाउँछ ।
नेपालको चाहना अनुसार विकास प्रक्रियामा सहयोग गर्न चीन हरपल तयार रहन्छ । चिनियाँ कम्पनीहरु नेपालमा लगानीका लागि अत्यन्त उत्सुक छन् । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणताका पनि गहन सहकार्यवारे विभिन्न महत्वपूर्ण समझदारीहरु भएका छन् । मलाई आशा छ, नेपालले ठोस प्रतिवद्यता र कार्यान्वयनसहित आफ्नो विकासको लक्ष्यलाई चाँडै पुरा गर्नेछ।
प्रकाशित: २०७७ पुष २८ गते ९:४४